अन्धोपनाबाट बच्न के-के गर्ने ? – Everest Dainik – News from Nepal
अन्धोपनाबाट बच्न के-के गर्ने ?
चितवन, असोज २५ ।
मानव शरीरको संवेदनशील अङ्गका रुपमा रहेको आँखाको सुरक्षा गर्न सके दृष्टिविहीन हुनबाट बच्न सकिने नेत्र विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।
आँखा रोग विशेषज्ञका अनुसार पाँच कारणबाट अन्धोपना हुने गर्दछ । भरतपुर आँखा अस्पतालका वरिष्ठ आँखा स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक बिमल पौड्यालका अनुसार, मोतिविन्दु, जलविन्दु, आँखामा लाग्ने चोटपटक, मधुमेह, भिटामिन ‘ए’को अभावका कारण अन्धोपना हुने गर्दछ ।
पौडेलका अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष दुई लाख नेपालीको मोतिविन्दुको शल्यक्रिया हुन्छ । थप ३० हजारले शल्यक्रियाका लागि हरेक वर्ष पर्खनुपर्ने उहाँ बताए ।
आँखा रोग विशेषज्ञ डा पुष्पा गिरी ४० वर्ष नाघेका व्यक्तिले आँखाको चाप परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । समय समयमा आँखा परीक्षण गरेर यो रोगको रोगथाम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अन्धोपनाको अर्को कारण चोटपटक हो । आँखामा चोटपटक लागेमा अल्सर भएर फुलो पर्ने गर्दछ । डा. गिरीका अनुसार, यस्तो अवस्थामा हेलचेक्र्याईं नगरी तत्काल चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार थालेमा आँखा बचाउन सकिन्छ । नेपालमा आफूखुशी औषधि प्रयोग गरेर धेरै दृष्टिविहीन भएका छन् ।
समयमै परीक्षण गरेर उपचार थालेमा बालबालिकालाई अन्धो हुनबाट जोगाउन सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । डा. गिरि भने, “बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपूर्व आँखाको परीक्षण गर्न सकेमा दृष्टिविहीन हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।”
यसैबीच नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवन शाखाले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व दृष्टि दिवस मनाएको छ । सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, सङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चिजकुमार मास्के, पूर्वसभापति प्रभातकुमार जोशी, सभापति कृष्ण धरेल लगायतले आँखाको ज्योति गुम्नबाट बचाउन समय समयमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस